Ngaliphi ixesha ubudala uTiger Woods waba ngowesiqhelo se-golfer ? Ixesha apho i-Woods yafikelela khona yayiyi-13.
Isikhumbuzi: Yintoni Eyabonwa?
Amagama athi "qhafaza i-golfer" kwaye "ukufikelela ekuqaleni" okanye "ukukhubazeka ngokukhawuleza" kubhekisela kwikhowudi ye-golfer's handicap. I-golfer kuthiwa yi-golfer yokuqala xa efumana ukukhubazeka kwe-zero. Ingqungqutyana encinci yegolfu ifikelele phambili, kunye neqhekeza elinesibini elisezintlu zegalufu ezindala.
Xa i-Woods iphumelele kwi-Scratch Handicap
Ingqungquthela yayivuthiwe, ineminyaka eli-13 ubudala xa eqala ukuba yi-golfer. I-Woods yazalwa ngoDisemba 30, 1975, ngoko ke yajika iminyaka engama-13 ngolunye usuku ukuya ngonyaka ka-1988.
I-Woods yayisondele ukutshitshisa iminyaka emibini ngaphambi koko: Wayeneminyaka engama-2 ubudala, eneminyaka engama-11 ubudala. (Ukuqhawula loo mijelo embalwa yokugqibela kwi-index ye-handicap ukufikelela kwi-zero ngokuqhelekileyo kuyona nto inzima kunzima ukuyifumana.)
I-Woods yayisivele iphumelele iindwendwe ezinkulu ngeli xesha kwiedolophu zegalufu ezincinane, kwaye iinqununu ezinkulu ziza kuza. Emva kweminyaka emibini emva kokufika ekuqaleni, eneminyaka eyi-15 ubudala, i-Woods yanqoba u-FIRGA. Kwakuyi-1991 yase-US Junior Amateur Championship, kwaye wayeyena mncinci-owake wawunqoba loo mcimbi.
Waphinda waba ngu-Junior Am field ngo-1992 no-1993, wada wawunqoba i-Amateur yase-US iminyaka emithathu elandelelanayo (1994-96) ngaphambi kokuguqula iminyaka engama-20 .
Ezinye zezinye zeeNtshukumo ezincinci
Nazi ezinye ezimbalwa zezinto eziphambili kwi-golf ye-Tiger Woods yokuqhuba igolfu ekhokelela kwindawo eya kuqala ukuphumelela ngayo isilinganiselo sokukhubazeka:
Umdala wesi-2: Ukubonakala kwe-TV yokuqala yesizwe
Umdala wesi-3: Okokuqala waphula ama-50 kwizimbobo ezithoba, ukudubula ama-48
Umdala wesi-6: Isiqalo sokuqala-enye
Umdala we-8: Okokuqala wanikela uMqhudelwano weSizwe we-Junior World Junior (ophindaphindiweyo kwiminyaka eyi-9, 12, 13, 14)
Umdala we-11: Unokukhubazeka kwe-2
Umdala wesi-13: Okokuqala kufinyeleleka ukukhubazeka
Ukubhala Kwangathi Ukunyusa
Bon Anniversaire: Usuku lokuzalwa olumnandi kwiFrentshi
Ukunyuka nokuwa kwe-Automat